China Kuvaka chibooreso zvishoma, yakawanda-inoshanda chiwanikwa chibooreso, zvedongo tile girazi chibooreso zvishoma, simbi chibooreso, Overlord chibooreso, machena madziro chibooreso, cemented carbide hole akaona fekitori uye vagadziri | Boda
Kuvaka chibooreso zvishoma, akawanda-anoshanda chiwanikwa chibooreso, zvedongo tile girazi chibooreso, simbi chibooreso, Overlord chibooreso, machena madziro chibooreso, cemented carbide mugomba saha
Drilling oparesheni iri akanyanya rudzi rwekucheka maitiro. Chinodiwa kupedzisa iyo yekucheka maitiro ndeyekuti kuomarara kwechinhu chemidziyo kunofanirwa kuve kwakakwirira kupfuura icho chinhu chiri kugadziriswa.
Drill bit yakajairika muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, asi vanhu vazhinji vanogona kunge vasingazive iwo mabrowski maratidziro. Muchokwadi, kune akawanda marudzi eakaboora mabhureki, ayo anonyanya kusiyaniswa zvichienderana nekushandisa kwavo kwakasiyana, ndiko kuti, rudzii rudiki rwekuboora. Zvakajairika chibooreso chine twist chibooreso, chakadzika chibooreso, yakadzika gomba chibooreso, reamer, countersink, yepakati chibooreso zvichingodaro.
BOSENDA Multi-inoshanda kongiri drill / ceramic tile drill / alloy drill bit / triangle drill / glass drill bit / wall drill bit / titanium drill bit series inokodzera kudhiraina simbi, iron, mhangura, kongiri, aluminium, zvedongo tile, plastiki, machena, girazi gobvu, zvedongo, vitrified zvidhinha, machena, girenayiti uye zvimwe zvakaoma zvinopwanya zvinhu.
YG8Cc carbide bit ine zvirinani kupfeka kuramba uye kukanganisa kuomarara pane YG6 bit. Izvo zvigadzirwa zvine kudhindwa kweanopinza mazino maitiro, akatsetseka chip kubviswa, ayo anoita kuti ive yakajeka uye yakapusa kuvhura uye zvakanyanya kuvandudza kushanda kwekuvhura.
Kushanda chibooreso ikakuruma:
Makuriro ekushandisa chibooreso: yemagetsi chibooreso, kuchaja chibooreso, bhenji chibooreso, rova ​​roora uye imwe yakati sandara kuchera michina.
Magadzirirwo akazara Iwo anoverengeka mabasa ekuboora matomu anoshandiswa zvakanyanya munzvimbo yese yekuvaka. BOSENDA inopa yakakomba yehunyanzvi yekuboora mabheti zvinoenderana nezvaunoda uye nezvinodiwa.
BOSENDA Multifunctional Triangle Drill Bits / Drill Bits / Marble Stone Drill Bits, inova yakasimba, iine unopinza jasi, inotsvedza chip kubviswa pamwe nyore mashandiro. Yakanyanya kushanda sikuruu chip kubviswa, yakatsetseka muviri chikamu, kwete kunamatira kune banga, kuchera zvakanyanya uye hupenyu hwebasa hwakareba.
Iyo titanium yegoridhe kutenderera mubato inokodzera yemagetsi ruoko chibooreso, kuchaja chibooreso, bhenji vice, flat flat drill uye zvichingodaro.
BOSENDA chibooreso chidimbu chinotengeswa kune nyika dzese kondinendi. Iyo yekuboora mabheti akateedzana anonakidzwa nemhinduro yakanaka senguva dzose, uye isu ticharamba tichisimbisa pane zvigadzirwa zvemhando seyakagara.
Pashure: Kuveza huni saha, gypsum bhodhi gomba saha, PVC ndiro gomba saha, huni gomba saha, huni chibooreso, PVS chibooreso
Zvadaro: Electric sando chibooreso ikakuruma, kongiri chibooreso ikakuruma, SDS, Max, Hex, percussion ikakuruma, perforator, chibooreso matomu